IiCroatia Airlines kunye neSaber ziyaqhubeka nokusebenzisana ngempumelelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziseCroatia » IiCroatia Airlines kunye neSaber ziyaqhubeka nokusebenzisana ngempumelelo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziseCroatia • iindaba • Technology • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Agasti 12, 2019
ICroatia Airlines kunye neSaber Corporation umboneleli ngetekhnoloji kushishino lokuhamba kwihlabathi liphela, namhlanje babhengeze ukuvuselelwa kobambiswano lwabo ekudala bekho. Umphathi weflegi waseCroatia ebesebenzisa imveliso yolawulo lwengeniso lukaSabre ngaphezulu kweminyaka emine kwaye ngale nto ihlaziyiweyo, umphathi uya kuyiphucula ibe yiSaber AirVision Revenue Optimizer, isisombululo seshishini esikhokelela kwimveliso ephambili.
Kwindawo yentengiso ekhawulezayo yanamhlanje, nokhuphiswano, ukuseta ixabiso lemveliso sesinye sezigqibo ezibaluleke kakhulu ezinokwenziwa yindiza. Ukulungiswa kwengeniso yeSabre yezisombululo zetekhnoloji kunceda iinqwelomoya ukuba zithathe indlela enesidanga esingama-360 sokuqikelela, ukuhlalutya kunye nokwenza ngcono imithombo yabo yengeniso, ngokubonelela ukubonakala kwexesha lokwenyani kwingeniso iyonke yenqwelomoya, kuyo yonke imakethi kunye nayo yonke imihla yokuhamba. Ukubonelelwa kwemveliso kuyilelwe ukuvumela iinqwelomoya ukuba zenze uninzi lweempahla zazo kwaye zincedise ekucazululeni ii-silos zedatha ezinokubakho kwishishini leenqwelo moya.
Eyona nto iphambili kuyo yonke imveliso iyinyani yiRevenue Optimizer, isisombululo solawulo lwengeniso sokwenyani esisebenzisa inkxaso yesigqibo esikrelekrele ukucebisa ngokufumaneka, ngokusekwe kulwahlulo, ukukhethwa kwemfuno esekwe kubathengi kunye nokhuphiswano lobukrelekrele. Izifundo zeSaber zibonise ukuba iRevenue Optimizer inokunyusa ingeniso ukuya kuthi ga kwiipesenti ezintlanu, kunye nokuzisa ukuncitshiswa okukhulu kwexesha lokuqhubekeka. I-Revenue Optimizer inikezela ukuqonda kwedatha yexesha lokwenyani ngokudityaniswa komthungo kunye ne-inventri, imali yokuhamba, kunye nezisombululo zokuphucula amaxabiso. Ukufezekisa iphakheji yokwenziwa kwengeniso, yiSaber AirVision Revenue Integrity, enceda iinqwelomoya ukuqhuba ingeniso eyongezelelweyo ngokunciphisa ukubhukisha iingxaki kunye nokwandisa ukusetyenziswa kwesihlalo seenqwelomoya.
"Sijolise kwi-laser ekunikezeleni ngamava abakhweli beprimiyamu kwaye kulula kakhulu ukuba umgca wethu usempilweni," utshilo uJasmin Bajić, uMongameli kunye ne-CEO yeCroatia Airlines. “Kubalulekile ukuba siyikhusele ingeniso yethu ngokumisela amaxabiso afanelekileyo nokunyusa inani lezihlalo ezithengisiweyo. Izisombululo zikarhulumente ze-state-of-the-art zokwenza ingeniso zibalulekile ekwenzeni oku kwenzeke ngokusinika ulwazi olusebenzayo olusekwe kwiimfuno zabathengi, indawo ekhuphisanayo kunye nezinye izinto ezininzi. ”
Ukubhiyozela i-30 yayoth Isikhumbuzo kwi2019, iCroatia Airline igcina uthungelwano lwenqwelomoya kwiindawo ezingama-38 kumazwe angama-24. Ngo-2018, umphathi wenqwelomoya wabhabha inani labakhweli abangama-2,168,863 - ukwanda ngeepesenti ezimbini xa kuthelekiswa nonyaka ka-2017. Khroweyishiya njengendawo yokundwendwela, eyamkela ngaphezulu kwe-18 yezigidi zabakhenkethi ngo-2018.
"Ayisiyomfihlo into yokuba i-aviation yezorhwebo lushishino olunokhuphiswano oluphawuleka kakhulu ngokuxinana," utshilo UAlessandro Ciancimino, usekela-mongameli, ukuthengisa ngeenqwelomoya, iYurophu, Isisombululo seSaber Travel. “Ukuqonda onke amathuba okufumana ingeniso ngobukrelekrele kubalulekile kwimpumelelo yexesha elide yenqwelomoya. Kuyasivuyisa oko Khroweyishiya Iinqwelo-moya ziya kuqhubeka zisebenzisa izisombululo zorhwebo ezikhokelela ekuphuculeni ukukhula kwazo kwixesha elizayo. ”